जी न्युजमार्फत ओलीले पाेखे प्रश्न हराएको पत्रकारिताप्रति असीम अनुराग
- केशवराज जोशी र बसन्त बस्नेत
तस्वीर साैजन्यः प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालय
कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योहो टीभीका लागि जीवराम भण्डारीलाई दुई घन्टा लामो अन्तर्वार्ता दिँदासम्म सुधी नेपालीजनको धैर्य परीक्षण भएकै थियो । त्यसको अघिल्लो दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैगर्दा ओलीले बोलेको कुरा नै त्यहाँ प्रतिविम्बित थियो, जसलाई प्रस्तोता भण्डारीले बिनाप्रश्न १० मिनेटजतिसम्म मुन्टो हल्लाउँदै सुनिरहेथे ।
भण्डारीको प्रश्न सोध्ने शान्त, विनयी शैलीका प्रशंसक थुप्रै छन् । हाम्रा टक शोहरूबाट वास्तविक प्रश्नहरू गायब नहुन् भन्ने जिज्ञासु चिन्तकहरू पनि उत्तिकै ।
प्रसङ्ग ओलीको पछिल्लो अन्तर्वार्ताको । अरु प्रश्न त छाडिदिऊँ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद गगन थापालाई समेत प्रश्न गरेकामा ठाउँको ठाउँ दण्डित गर्ने ओलीले मिडियालाई हरेक भाषण, वार्ताहरूमा सराप्छन् । बुद्धिजीवीलाई त झन् कोट काट्ने मुसा नै भनिदिन्छन् । अब त संसद नै सिध्याएर अंकुशविहीन बन्ने बाटोमा उनी अघि बढिसके, जसको फैसला सम्मानित अदालतमा, अनि सर्वशक्तिमान नेपाली जनताको अदालतमा हुने नै छ ।
हिजो सोमबार भारतीय ‘मिडिया सर्कसमध्येको एक’ भनेर चिनिने जी न्युजमा ओलीको अन्तर्वार्ता आएपछि अहिले त्यसैको चर्चा छ । अन्तर्वार्ता अहिले सोसल मिडिया ट्रेन्डिङमा छ । यस्तो हुनु स्वाभाविक छ । राजनीतिक कुराकानीमा ईश्वर, धर्मदेखि सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीसम्मका कुरा जोडिएपछि आजको हिन्दुस्तान, अनि त्यहाँका केही ‘गोदी मिडिया’लाई पुगिहाल्यो ।
गैरसंवैधानिक संसद विघटनमार्फत निरंकुशताको चरणवद्ध यात्रामा अघि बढेका ओली आज नेपालका उदार तथा प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीको तारो बनेका छन् । भएको राष्ट्रियसभाको समेत बोल्ती बन्द गर्नेगरी अधिवेशन अन्त्य गरेका ओलीले प्रष्टै भनिसके, ‘खुब विधि प्रक्रिया भन्नुहुन्छ तपाईंहरू । विधि प्रक्रियाले खानलाउन दिन्छ ?’ खैर यसको छुट्टै कुरा गरौँला ।
जी न्युजमा हिन्दीमै बोलेका ओलीले सोही समयमा ‘वि अन’ नामक च्यानललाई अङ्ग्रेजीमा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । सो अन्तर्वार्ता पनि ट्रेन्डिङमै छ । अन्तर्वार्ता लिने संस्था एउटै हो । भाषा मात्रै बेग्लै, प्रश्न उही । जवाफ त झनै उही ।
यी दुवै अन्तर्वार्ताको समय मात्रै होइन, धेरै हदसम्म विषयवस्तु पनि एउटै छ । सामान्य हेरफेर त हुने नै भयो । अङ्ग्रेजी अन्तर्वार्तामा ओलीले नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमको समेत कुरा गरेका छन् । र, यसमा उनले आन्तरिक विषयमा जी न्युजको तुलनामा केही बढी चर्चा गरेका छन् ।
सवालहरूको संहार गर्नेमा दुर्नाम कमाएको भारतको स्थापित च्यानल हुनुको नाताले र नेपालमा अलि बढी नाम सुनिएको च्यानल हुनुको नाताले जी न्युजको कुरा गरौँ ।
जी न्युज त्यही च्यानल हो, जसले केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीबीचको भेटवार्तालाई अतिरन्जित गरी ‘ओलीकी इश्कीयाँ...’ रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो । त्यहाँ प्रयुक्त शब्दहरू दोहोर्‍याएर उच्चारण गर्न पनि लायक छैनन् । हामी नेपालका प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छौं, तर विरोधका नाममा तथ्यहीन सामग्री पस्केर बद्नाम गर्दैनौँ । त्यो जिम्मेवारी हामीलाई हाम्रो पेसागत निष्ठा र आमनागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबोधले दिएको हो । जी न्युजहरूलाई यस्तो संहिताबारे छुः मतलब ! सम्भवतः पीत पत्रकारिता भन्ने शब्द यस्तै बेला काम लागोस् भनेर निर्माण गरिएको हो । पछि जी न्युजले माफीसमेत माग्नुपरेको थियो ।
तर, अहिले यो बिर्सेका छन्, ओलीले । उनले यो विषयबारे सम्पादकलाई चासो राखे होलान् भनी पत्याउने आधार कमजोर छ । नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्व अनि नेपाली स्वाभिमानमाथि पटकपटक प्रहार गर्ने यो च्यानलमा ओलीको महिमामण्डन गरिएको अन्तर्वार्ता चकित तुल्याउने खालको छ ।
यो अन्तर्वार्तालाई अक्षयकुमारले मोदीको अन्तर्वार्ता लिँदा ‘मोदीजी क्या आप आम खाते है ? आम कैसे खाते हैं, काटके खाते है या चुसके ?’ भन्दै लिएको अन्तर्वार्तासँग तुलना गर्न सकिन्छ । अर्थात् यसलाई जवाफदेहिता खोज्नेभन्दा पनि छवि सुधार्ने अन्तर्वार्ताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
अपराधका मतियार सुधीर चौधरी
यो अन्तर्वार्ता जी न्युजका वरिष्ठ सम्पादक सुधीर चौधरीले लिएका हुन् । सुधीर चौधरी तिनै पत्रकार हुन्, जसले सन् २०१२ मा कांग्रेस सांसदसँग सय करोड घुस मागेको आरोपमा १४ दिन तिहाड जेलको हावा खाएका थिए ।
कांग्रेस सांसद तथा व्यवसायी नवीन जिंदलसँग उनको कम्पनीको नाम कोयला घोटालामा नजोड्ने सर्तमा जी न्युजका सम्पादकद्वय सुधीर चौधरी र समीर अहलूवालियाले सय करोड घूस मागेको आरोप थियो ।
अन्तर्वार्ताका लागि जी न्युजका वरिष्ठ सम्पादक सुधीर प्रश्न सोध्न होइन, प्रश्नहरूको संहार गर्न बद्नाम छन् । क्याराभान, वायरलगायत भारतीय स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले उनको बद्नामीका शृंखला नै छपाइसकेका छन् यसअघि ।
हिन्दु दक्षिणपन्थीप्रति नरम रहने र प्रगतिशीलहरूलाई सधैं धारदार प्रश्न गर्ने चौधरी यो अन्तर्वार्तामा ज्ञानी विद्यार्थीजस्ता देखिन्छन् भने ओली बडो स्वादले पढाउने शिक्षकजस्ता ।
आफ्नै गैरसंवैधानिक कदमका कारण रक्षात्मक बन्दै गएका ओलीका लागि यो अन्तर्वार्ताले अर्थ राख्छ । खुइलिँदै गएको राष्ट्रवादको छवि चम्काउन उनले सुधीर चौधरीलाई उपयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार अन्तर्वार्ता माग्ने थुप्रै थिए, क्युमा जी न्युज अगाडि आयो ।
फेरि एकपटक ओलीको स्पष्टवादिताको प्रशंसा भएको छ । राजावादीहरूदेखि हेर्दा कट्टर कम्युनिस्ट सुनिने जनमोर्चा पार्टीका नेताहरूसम्मलाई यो अन्तर्वार्ताले दिग्भ्रमित बनाएको छ । ‘भारतीयसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सकेको’ भन्दै सोसल मिडियामा फेरि ओलीको हाईहाई भइरहेको छ । वास्तविक प्रश्नहरू एकातिर छन् । तिनलाई कृत्रिम सवाल र मखमली जवाफहरूले हास्यास्पद ठहर्‍याउन खोजिएको छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत तुष्टिका लागि प्रजातन्त्र नै भत्काउन पछि नपर्ने ओलीको नियत, अनि यसको जरोमा जाने हिम्मत भने कमैमा देखिन्छ ।
ओलीले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई चुच्चे नक्सामा ल्याउनु आफ्नो व्यक्तिगत पहल ठान्दै अब जमिन ल्याउने तर्क गरेका छन्, जबकि चुच्चे नक्सा संसदले सर्वसम्मत पास गरेको थियो । बरु ओली आफैँले चैँ त्यसलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउन लगाए । त्यसबारे नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता हालसम्म ठानेका छैनन् ।
आफूलाई पोलिटिकल कम्युनिस्ट भनाउने नेताको धर्मकर्म र पौराणिक विरासतप्रतिको अनुराग चकित तुल्याउने खालको छ । धर्मलाई ओलीले व्यक्तिको आस्थाका लागि होइन, राष्ट्रको माटोसँग जोडेर बदनाम गर्न थालेका छन् । रामको नागरिकता भारत होइन, नेपालको ठोरी भएको उनको पुनः जिकिर छ । काल्पनिक माटोप्रति अनुराग नराखेर टीका नलगाउन उनको आग्रह छ ।
उनको तर्क मान्ने हो भने श्रीलंका, कोरियाका बुद्धमार्गीले त्यहाँका गुम्बामा ढोग्न नमिल्ने भो । अनि जेरुसलेम नजाने क्रिस्तान र मक्का नपुग्ने मुस्लिमको त आस्था नै विचलित भएको मानिने भयो । विवेकलाई घरैमा छाडेर भाषण सुन्न जाँदा भव्य लाग्ने, तर यो कस्तो दयनीय व्याख्या ओलीको ?
अन्तर्वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले कस्तो च्यानल र कस्तो व्यक्ति छनोट गरे भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् कतिपयले ।
जी न्युज सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीप्रति सद्भाव राख्ने र खुल्लमखुल्ला दक्षिणपन्थी विचारधाराको वकालत गर्दै हिँड्ने च्यानल हो, जसलाई भारतका उदार लोकतन्त्रवादीहरूले ‘गोदी मिडिया’(भाजपा सरकारको गोदी अर्थात् काखमा बसेको) मिडियाको संज्ञा दिने गरेका छन् ।
अर्नव गोस्वामी, अञ्जना ओमकश्यप, सुधीर चौधरीलगायतलाई गोदी मिडियाका सर्कसबाज मान्छन् । पपुलर हुनलाई पपुलिस्ट हुने छोटो बाटो अख्तियार गरेका छन् उनीहरूले । कश्मीरमा राज्यले नागरिकमाथि हिंसा मच्चाउँदा होस्, या नागरिकता कानुनबारे आम भारतीय जनता बोल्दा– उनीहरू सत्ताका औजार बन्न पुगे । अनि सत्तामा हुने भाजपालाई कहिल्यै प्रश्न नसोधेर प्रतिपक्षमा खुम्चिएको कंग्रेसलाई बाह्रैमास अन्टसन्ट प्रश्न सोधिरहे । त्यहाँ कुनै तटस्थता, स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता, अनि तथ्यको अन्वेषण प्रयोग भएन । भर्खरै भारतभरि चलेको किसान आन्दोलनका बेला किसानमाराहरूलाई होइन, स्वयम् किसानहरूलाई प्रश्न सोधेर सानो स्वार्थी घेराको वाहवाही पाए उनीहरूले । सुधीर तिनैमध्ये एक थिए । तिनै सुधीरलाई किसानहरूले गोदी मिडिया भन्दै आन्दोलनभित्र छिर्न समेत दिएनन् ।
के छ अन्तर्वार्तामा ?
चौधरीले पहिलो प्रश्नमा ओलीलाई नेपाल भारतसँग किन बरावरी गर्न खोज्दै छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले कुनै पनि देश आकारमा, जनसंख्यामा सानोठूलो हुन सक्ने तर देशको रूपमा सानोठूलो नहुने जवाफ दिएका थिए ।
कुरो ठीकै हो । तर ‘र’ को प्रमुखले मोदीको दूत भन्दै बालुवाटारमा आएर ओलीसँग भेट्न सक्ने देशका प्रधानमन्त्री के आफ्नो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई आफ्नो दूतका रूपमा मोदी भेट्न पठाएर सम्बन्ध बराबरी बनाउन सक्लान् ? के नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यसको व्यावहारिक परीक्षण हुन सक्ला ? त्यसो त ओलीले आफ्ना कुरालाई व्यवहारमा पुष्टि नगरे पनि सार बेठीक होइन । बराबरी सम्बन्ध जाँच्ने कसरी व्यवहार हो, कुरो यही र यति मात्रै हो । ओलीले आजको दिनमा त्यो गरेका छन् कि छैनन् ?
अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले आफूले भारतसँग स्पष्टता चाहेको र समस्यारहित सम्बन्धको चाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यसरी सुरु भएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालका थुप्रै ऐतिहासिक पौराणिक विरासतको गुणगान गाएका थिए ।
अन्तर्वार्ताको झण्डै ९० प्रतिशत समय यस्तैमा बिताएका ओलीले ऋषिमुनीदेखि रामसम्म अनि नालन्दा विश्वविद्यालयदेखि युरोपेली तथा मेसोपोटामियाको सभ्यतासम्मको ज्ञान बाँड्न भ्याए । ज्ञानको स्टक रित्तिएर हिमालयको देशतर्फ विचरण गर्न आएका चौधरीलाई पनि के बितेको थियो र ? उनी मन्त्रमुग्ध सुनिरहे ।
योबीचमा ओलीले चीन र भारतको बीचमा वार्ताका लागि सहजकर्ता बन्ने कुरासमेत छुटाएनन् । कुनै बेला प्रचण्ड पनि यसै भन्थे । नेपाली नागरिकहरूको दुर्भाग्य, यहाँ कुरा धेरै हुन्छ । उनीहरू काम चाहन्छन् ।
दुई देशको गतिशील पुल बन्ने कुरा ओलीले अङ्ग्रेजी च्यानललाई दिइएको अन्तर्वार्तामा पनि गरेका छन् ।
कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमिको दाबी पुनः दोहोर्‍याउनु, राम जन्मभूमि नेपालमै रहेको कुरा फेरि दोहोर्‍याउनु अनि सम्मानजनक समानताको आधारमा दुई देशको बीचमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अगाडि बढ्नुपर्ने ओलीका अभिव्यक्ति धेरैले मन पराएको देखिन्छ । यी कुराहरू आमनेपालीको आत्मसम्मान र संवेदनासँग जोडिएकाले पनि यसमा ओली धेरै हदसम्म सहानूभूति बटुल्न सफल देखिन्छन् ।
नेपालीको दुर्भाग्य, उनीहरू भावुक छन् । अवसरवादी नेताहरूले यो भावुकता, अनि स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोमको सख्त फाइदा उठाउने गरेका छन् । यहाँ त सत्तामा मात्रै होइन, राष्ट्रवादमा पनि आलोपालो हुन्छ ।
तथ्यहीन पौराणिक किस्साप्रतिको ओलीको अतिशय अनुरागले कतै नेपालमा हिंसात्मक वामपन्थी राजनीतिबाट उदाएको नेता आज वैचारिक रूपमा दक्षिणपन्थको बाटोमा सवार छ । भारतको कट्टर हिन्दुवादी भाजपाभन्दा पनि अनुदार रवैयाका साथ उनी अघि बढ्लान् कि भन्ने आशङ्का त्यत्तिकै बढाएको छ । हेर्दाखेरि पहिचानको विरोध गरेजस्तो पनि देखिने, तर उत्पीडित वर्ग समूदायलाई खिसी गर्दै वर्चस्वशाली समूहको पहिचान सबैमा लाद्न खोज्ने ओलीको शैलीले यहाँको सीमित वर्गलाई खुसी नै पारेको थियो विगतमा ।
जी न्युजको वार्ताबारे सेतोपाटीका सम्पादक अमीत ढकालले ट्वीटमार्फत अनुरोधात्मक प्रश्न गरेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजी, देशबाहिरकाको पालो सकिएपछि हाम्रो टिमलाई पनि अन्तर्वार्ताको समय दिनहुन विनम्र अनुरोध । हामीसँग देशभित्रका र धेरै साधारण प्रश्न छन् ।’
ढकालको यो विनम्रताभित्र सूक्ष्म व्यंग्य मिश्रित छ । त्यसको जवाफ आउने सम्भावना करिब छैन । किनभने शक्तिसीनहरू आज अन्तर्वार्ताबाट प्रश्न गायब पार्न चाहन्छन् । उनीहरू निश्चित सम्पादकलाई प्रयोग गरेर पत्रकारिताको साख सिध्याउन चाहन्छन् । नत्र ढकाल कुन देशमा बनेको मसीले लेख्छन् भन्ने किसिमको, सुन्दा मीठो तर विषाक्त उग्रतावादी तर्क गर्नेहरूलाई सेयर, रिट्वीट गरेर सत्तामा बस्नेहरूले नांगो प्रोत्साहन गर्ने थिएनन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७, २३:०४:००
केशवराज जोशी र बसन्त बस्नेत